Maxaa ka dhacay marinka Qaza kadib heshiiskii xabad joojinta ee u dhexeeyay Xamaas iyo Israa’iil? - Axadle - Axadle Wararka Maanta
Qaza (Axadle) – Dabaaldegyo ballaaran ayaa ku faafay Marinka Gaza, Daanta Galbeed iyo gudaha Falastiin taasoo ka dhalatay xabad joojinta u dhaxeysa Israa’iil iyo kooxaha wax iska caabinta Falastiin, dabaaldegyadu waxay muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin guusha. Milatariga Israel ayaa adeegsada hubka casriga ah
Weriyaha Al-Jazeera ee Qaza, Wael Al-Dahdouh, ayaa sheegay in jidadka marinka Qaza ay buux dhaafiyeen dad u dabaaldegaya dhammaadka dagaalka Israa’iil ee Marinka Gaza, isla markaana rasaasta laga maqlayo guud ahaan dhulka Falastiin. reer binu Israa’iil.
Dibadbaxayaasha ayaa ruxayay calanka Falastiin, Dhaqdhaqaaqa Mucaaradka Islaamka (Xamaas) iyo kooxaha kale ee iska caabinta dhamaan wadooyinka, dhamaan masaajidada waxay ku bilaabeen saqafka kore codad aad u xoogan oo laga maqlay meelo fog fog
Waxaa sidoo kale jiray dalabyo sare oo ku saabsan kooxaha iska caabinta iyo ammaanta samirka dadka reer Falastiin ee Masjidka Aqsa, Qudus iyo xaafada Sheikh Jarrah ee Mount Mount.
Dabaaldegyo noocan oo kale ah ayaa ka dhacay Daanta Galbeed, iyadoo dadweyne aad u fara badan oo ku nool magaalada Ramallah ay salaamayeen fallaagada iyagoo ugu hambalyeeyay waxqabadka milatari ee muuqda ee ay kula dagaallamayaan qabsashada Yuhuudda ee dalkooda.
Dhanka kale, dabaaldegyo ayaa ka billowday magaalooyinka Hebron, Nablus, Salfit, Tulkarm, Jerusalem, Hebron iyo kuwa kale isla markii ay dhaqan gashay xabad joojinta, sidoo kale waxaa jiray dabaaldegyo iyo isu soo baxyo ka dhacay gobollada gudaha ee Falastiin sida Umm al-Fahm iyo Ain al Xeryaha Hilweh ee qaxootiga Falastiiniyiinta ee Lubnaan.
Xabad joojinta marinka Qaza subaxnimadii Jimcaha ayaa timid kadib markii Masar ay dhexdhexaadisay xabad joojin 11 maalmood ah oo udhaxeysa Israel iyo Xamaas.
Golaha wasiirada Israa’iil ayaa xaqiijiyay inay heshiis xabad joojin ah la gaareen Falastiiniyiinta si loo soo afjaro dagaalka tobanka maalmood qaatay.
Golaha Amnigu wuxuu si aqlabiyad leh ku ansixiyey soo-jeedinta dhammaan saraakiisha amniga, Shin Bet, Mossad iyo madaxa Golaha Amniga Qaranka, si loo aqbalo soo-jeedinta Masar ee xabad-joojin aan shuruud lahayn. Labada dhinacba waxay dhaqan geli doonaan goor dambe, ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay golaha wasiirrada Israa’iil.
Kooxaha Falastiin ee Xamaas iyo Islamic Jihad ayaa tan iyo markii ay soo saareen bayaan ay ku xaqiijinayaan aqbalaadooda xabad joojinta.
Sarkaal ka tirsan Xamaas ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Associated Press in xabad joojinta ay tahay guul u soo hoyatay shacabka Falastiin iyo guuldaro soo gaadhay raiisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu.
Cali Barakeh wuxuu sheegay in dagaalyahanada Xamaas ay feejignaan dheeri ah yeelan doonaan ilaa dhexdhexaadiyeyaashu ay dhameystiraan faahfaahinta heshiiska xabad joojinta iyo waqtigiisa.
Ugu yaraan 232 Falastiiniyiin ah, oo ay ku jiraan 65 carruur ah, ayaa la dilay tan iyo markii uu dagaalku billowday. Israel dhexdeeda, 11 qof ayaa lagu dilay, oo ay ku jiraan laba carruur ah.